Ibhizinisi lezimbongolo likaJan libuyile | Scrolla Izindaba
Ibhizinisi lezimbongolo likaJan libuyile
Njengoba sisesigabeni sokuqala somvalelo, kanjalo nebhizinisi lezimbongolo likaJan Mashaba selibuyile.
UJan wase-Blood River ngaphandle kwase-Polokwane e-Limpopo usebenzisa izinqola zakhe zezimbongolo ukuqoqa isihlabathi emfuleni – nesihlabathi sokwakha bese ezidayisela abahlali. Uqoqa nodoti emizini yabantu bese eyilahla ezindaweni zokulahla udoti.
“Ngisidayisa nge-R150 isihlabathi futhi le mali iyangisiza ukondla umndeni wami,” kusho yena.
“Ngiyathanda ukusebenzisa izimbongolo ngoba azidingi uphethiloli nokulungiswa. Ngiyazivumela zidle ziphuze namanzi ngenkathi mina ngisebenza ngesihlabathi,” kusho yena.
Ubaba kaJan washona ngesikhathi uJan eneminyaka eyi-11 wase esethatha izintambo zebhizinisi lezimbongolo.
“Wayezisebenzisela ibhizinisi futhi wayondla ekhaya. Akekho owayengazisebenzisa ngemuva kokushona kwakhe ngakho-ke ngaqhubeka nebhizinisi lakhe,” kusho yena.
UJan wondla umama wakhe kanye nomfowabo omncane. UJan uphinde alime amapulazi asemakhaya futhi bese ekhokhisa cishe ama-R500 kuya ngosayizi.
“Ngabona ithuba lokwenza imali enhle ngalibamba ngezandla zombili. Anginamahloni ngokusebenzisa izinqola zezimbongolo. Ngiyayazi injongo yami empilweni,” kusho yena.
“Okuhle ngezimbongolo ukuthi ziyangazi futhi ziyalalela uma ngikhuluma nazo. Bayayilalela imiyalo yami,” kusho uJan.
Useqashe abantu abathathu ukuthi bamsize.
Omunye wabo, u-Ally Ntini, uthe uyakujabulela ukwenza imali.
“Ngiyakujabulela ukusebenza yize abanye abantu behlekisa ngathi njengoba sihamba ngenqola yezimbongolo uma sibizwe ikhasimende. Okuhle ukuthi akudingeki ngicabange ngokweba kanye nokuphanga abantu imali yabo ngoba uJan uyangikhokhela,” kusho yena.